Ngoku bangavuki Holm Nature! | Holmbygden.se
posted on 6 UCanzibe, 2017 yi Holmbygden.se
Ngoku, iintaka zifuduka babuyele, they are 10 amaxesha ngaphezulu kunokuba kwakunjalo ngexesha ebusika elizweni lethu. Okokuqala up the blackbird ngoku. Yaba Titti yaye uJørgen Olsson, Östbyn, ingxelo ukuba yokuqala; 12/3. Kamva ngaloo veki kwakhona chaffinch wazibonakalisa kubo. Kukho unxibelelwano ukutya ntaka kule ngingqi ufumana vårbesöken yokuqala. Apha Navarn (300 MOEH) kwaze kwaba 19/3 ngaphambi kokuba kufike blackbird yokuqala.
Kangangeminyaka enye enesiqingatha edlulileyo mna wenza isibheno ukuba Iintaka nezinye izilwanyana e Holm Bygdens lasekhaya (Kwakhona lowu slide i). Titti Olsson, Östbyn, no Arnold Johansson, Långliden, abo babonisa umdla.
Arnold (82) kuye kwaba wehlathi kunye sezinto uyithandayo, indawo endaweni enye, ukususela ebuntwaneni. Ndandimtyelela ngo Epreli 2016 baza idayari yakhe indalo. Uye waqaphela 20 vårfåglars ukufika yokuqala Långliden phakathi 1951-2011. 60 amanqaku nyaka uya kuba inzululwazi Mellannorrland and Sweden. Apha uyakwazi ukubona indlela kwaMagwangqa ecula, Lapwings baba anqabe / kamva yaye, endaweni yoko, le blackbird kunye chaffinch yokuqala Liden ngexesha entwasahlobo ngoku. idayari Arnold uye sifakiwe kwiBhodi yoLawulo kunye Swedish Species Information Centre (SLU e Uppsala). University Agricultural Swedish (SLU) sebeqalile fenologiprojekt yethu ("Ukufika kwentwasahlobo" kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe) ngokwemiqathango enezityalo nezilwanyana. Oku kubandakanya butterfly yokuqala, inyosi enkulu enoboya, nge, kweentyatyambo, intaka ukufika, mm nobudlelwane kule ndawo (ngesakhiwo) uhlala. Le yinxalenye tshintsho zilandelayo kwimozulu eSweden / World.
Titti yaye uJørgen naye izihlandlo eziliqela saphawula uphondo izikhova izikhova umhlaba ngongcwalazi kwi infields kwicala elingasentla Holmsjön ukususela phakathi April! Christin "Titti" Olsson, Östbyn, uyise basebenza Sundsvall F.D.. "Bird legend" ku 80- 90 talet.Nils Lundmark, wakhwela ngoko nangoko efuna ukuphinda-ukuseka umdla wabo intaka. Nisse, abafa 2006, wachitha ixesha e Holm- kunye Liden indawo-inventri kunye yokukhala izikhova wabeka up ezimakhulu mabini zeBRT kwingingqi yethu ngenkulungwane 80-90 (izikhova kunye dippers). phantsi dewi 60 minyaka njengethuba osisazinzulu wabeka Nisse phezulu phezu 1600 ngogesi ezincinane beentaka malunga 400 izikhova. Yena engqongwe phezu 12.000 iintaka.
Årsvädret e Holm kwakukuhle ukuba zezilwanyana (kwakhona Flora). Agasti nangoSeptemba ke kunomzimba eziqhelekileyo kunye negalelo ukusinda zeentaba ebengaphezulu ngexesha lasehlotyeni oluqhelekileyo. ngesiqhelo uphila ngo Intshontsho evela inkunkuma kunyaka wokuqala. Ngoku, basinda olubuthathaka kakhulu phambi kokuba safudukela phezu ekwindla.
Osayine ine-inventri iintaka ezizalayo kule ndawo ukusukela 2000 (e Storsten Mbovane phezulu Storflon, kumantla Vike) kunye Lokåsen e Nordanede (kumazantsi Holm).
Mpumelelo-inventri kule yokugqibela 4 iminyaka bafana ibhokisi esecaleni. Kususela kwiindawo zethu ehlathini, kanye le 16 iintaka okuthathwa ngayo 80 % lawo emahlathini Holm kaThixo.
Le ungasinika ngezantsi 13 abantu ingxelo ngeziphumo zabo Holm kulo nyaka (7 Indawo yokuhlala e Sundsvall!!?). Apha ungabona ngokweenkcukacha oko ingxelo in Holm.
Kambe ke thina silindele abathi zenu ngexesha 2017. Nceda uqhagamshelane Titti kwaye ndenze ntoni na ukuze abe intatheli ukuba kwenzeka ntoni kwindalo e Holm. kukunceda We udeske.
iintaka ibike Holm 2016
Ebusika, i "ukunqongophala iintaka", nje 10 % kuthelekiswa ihlobo. Jonga ibhokisi ngaphandle.
Ezinye kokuma ezizodwa ngexesha 2016 i Golden Eagle ixesha oluzalela ehlathini emantla Holmsjön. Titti yaye uJørgen i Östbyn abe kestrels oluzalela kwindlu yentaka intaka ilizwe iminyaka eliqela. Ukongezelela, ngoku entwasahlobo 2017 wayenolwazi owl lomhlaba yaye hornuggla basike e Holmsjön kufuphi emakhayeni abo.
/ Iintaka abasesichengeni ezisengozini, eziqhelekileyo Holm
Miljödepardementet abe, nge EU, en S. K. List Red osebenza kuzo zonke izilwanyana- kwaye växtarterter uluhlu yaseYurophu lweentlobo ezisengozini.
eduze wamsongela (NT kwi kwiSihlomelo)
abasengozini (VU kwi kwiSihlomelo)
Abaliqela eduze wamsongela yaye abasengozini iintaka zibe indawo lokusinda kahle kule ndawo Holm.
Zicofwe ukuze bandise okanye ukubona zifakwe kuyo ukuze format PDF: iintlobo abasesichengeni kunye kufuphi sesichengeni Holm
"Le endala e Navarn"
Xela amabanga nyoni kuthi:
Injongo kukuba ukwenza uthungelwano ezinkulu ukuvela umfanekiso ezifumaneka kule ndawo. Obanzi, inethiwekhi iya kunatyiselwa ezanyisayo, izinambuzane kunye nezityalo ukufumana umfanekiso olunzulu imeko yokuhlala kumantla hlathi. Kodwa imalunga ukukunika ukwazi ukuze sikwazi ukwandisa Guard indalo.